ပြည့်စုံ: March 2008
Pyae Sone | 4:10 AM | poem | ကဗျာ
“ ပိုးထိုးတဲ့ကြမ်း ”
တောင်ကျရေလို အရိုင်းဆန်မှု အရှိန်မှာ
သူတို့တွေ စိတ်ကြိုက် ထွန်ယက်နေရအောင်
မှတ်ချက်...ရေငွေ့ပျံ မဟုတ်ပါ (အိမ်ပြန်ခြင်းကိုဆိုလို၍-“ ပြန်”-ဆိုတာသုံးထားခြင်းပါ။)
“ အခွံ ”
ဘာမှမရှိတာကို အခွံ ပါလို့
သဲမုန်တိုင်း တစ်ခုပဲ လိုတယ်
ချောင်းရော မြောင်းပါ ကောသွားတာ ကြာလှပေါ့...
(ကျနော်ဟာ အဲဒီလိုချောင်းကော. မြောင်းကောပါ)
ဘယ်ဦးထုပ်မှ ဦးခေါင်းကို တစ်လုံးထပ်ပိုပြီး
“ ဆပ်ပြာ ပူပေါင်း ”
တောက် ! !
ကျနော်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နေနေသည် နို့ဖိုးစခန်းတွင်နေထိုင်နေရာမှ ကျနော့်အား သူ၏ရင်တွင်းဖြစ်ခံစားချက်များကို ကဗျာအဖြစ်ပုံဖော်၍ကျနော်ဆီကို ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပေးပို့လိုက်သောကဗျာများအား ကျနော့်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့် မြန်မာပြည်သားအားလုံးကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်းခံစားရတာကို မြင်နိုင်မယ် နားလည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ...
အချိန် - 4:10 AM
Pyae Sone | 2:31 AM | poem | ကဗျာ
ငါ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ ရေးခြစ်
မြက်ခင်းစပ်က “နှင်း”တစက်ကြောင့် ဒီကဗျာဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရင်ဘတ်ထဲ အချိန်မတန်ခင် ပြန့်လွင့်
ငါက သူ့ကိုချစ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
လွမ်းကွဲကြေ သံစဉ်တွေလား .....
..... ....... ........ ....... .......... ။
အချိန် - 2:31 AM